Hotelka Madina ee Kismaayo oo dib loo furay sanad kadib weerarkii cuslaa
Madina Hotel Kismaayo
Mas’uulyiinta maamulka Jubaland iyo milkiilaha Hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa muddo sanad ah kadib dib u furay Hoteelkaasi kadib weerar khasaare xooggan oo naf iyo maalba isugu jiray oo lagu qaaday.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar qorshaysnaa 12-kii bishii July ee sanadkii hore maanta oo kale ku qaaday hoteelka xilli casar gaabad ah, waxaana weerarkaasi ka dhashay dhimashada 26 qof iyo dhaawac 50 kale.
Haddaba mas’uulyiinta Jubaland iyo kuwa Hoteelkuba maxay weerarkaasi ka barteen muddo sanad ah kadib. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo la xiriiray mas’uulyiinta Jubaland iyo kuwa Hoteelka ayaa warbixinta kasoo diray Nairobi.
Hotelka Medina ee Kismaayo oo dib loo furay sanad kadib weerarkii cuslaa